कोरोना महामारी रोकथाममा क्वारेन्टाइन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्व — Sanchar Kendra
कोरोना महामारी रोकथाममा क्वारेन्टाइन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्व
आज विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ । मानिसका जनजीवन अस्तव्यस्त छन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड – १९ को विश्वव्यापी महामाारीलाई सम्भवत: दोश्रो विश्वयुद्धपछिको ठुलो चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यो रोगले आजसम्म संसारमा झण्डै १७ लाख मानिस बिरामी परिसकेका छन भने १ लाख २ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। यतिखेर महामारी फैलिएका देशहरुमा अधिकांश मानिस आफ्नो काम, व्यवसाय छोडेर घरैमा बस्न बाध्य छन ।
यो रोगले युरोप र अमेरिका बढी प्रभावित छन् भने संसारका २०९ भन्दा बढी देशमा यो भाइरस प्रवेश गरिसकेको छ। चीनको वुहानबाट शुरु भएको यो रोग ३ महिनाभन्दा छोटो अवधिमा नै विश्वको कुना कुनामा पुगिसकेको छ । यसको मुख्य कारण मानिसको तीव्र देश-देशान्तर, आवत जावत र यो भाइरस सजिलै एक व्यक्तिबाट अर्कौ व्यक्तिमा सर्नु नै हो । तुलान्तमक रुपमा अफ्रिका र एशियाभन्दा अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुमा यो रोग छिटो फैलावट हुनका पछाडि त्यहाँको विकाश, समृद्धि र अवसरहरु मुख्य कारण हुन । किन की ती देशहरुमा मानिसका घुमफिर र आवतजावत बढी नै छ भने ती देशहरुले समयमा नै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका कदम नचालेकाे भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ।
यो भाइरसबाट लाग्ने रोग भएकाले यसको कुनै विशिष्ट उपचार हुदैन र नोभेल कोरोना नितान्त नयाँ भाइरस भएकोले यसविरुद्धको भ्याक्सिन पनि बनेको छैन, जुन अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। तसर्थ यो रोग रोकथामको लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका सावधानी, क्वारेन्टाइन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै प्रभावकारी उपायहरु हुन। खासगरी क्वारेन्टाइन र कन्टयाक्ट ट्रसिङ भनेको के हो र कोरोना महामारी रोकथाममा यसको महत्व के छ भन्ने कुरा यो आलेखमा संक्षिप्त जानाकारी दिने प्रयास रहेको छ।
क्वारेन्टाइन भनेको के हो ?
कनै पनि संक्रामक रोग अर्थात सर्ने रोग ग्रस्त ठाउँ वा देशबाट आएका मानिस वा ल्याइएका पशु पंक्षीलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म तोकिएको स्थानमा सुरक्षितसाथ राख्ने विधिलाई क्वारेन्टाइन भन्ने गरिन्छ । क्वारेनटाइन भनेको अवधि र स्थान दुवै हो । यो शव्द इटालियन भाषको Quaranta giorni बाट आएको हो, जसको अर्थ ‘चालिस दिन’ भन्ने हुन्छ । यो शव्द १७ औं शताव्दीमा फैलिएको प्लेग रोगको महामारी अर्थात Black death संगै प्रचलनमा आएको हो। क्वारेन्टाइनको मख्य उद्धेश्य रोगग्रस्त ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सो रोग फैलिन नदिनु हो । संक्रामक रोगका प्रकृति अनुसार क्वारेन्टाइनका अवधि फरक-फरक हुन्छन ।
कोरोना महामारी रोकथामको लागि क्वारेन्टाइन धेरै महत्वपर्ण छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको जुनसुकै मुलुकबाट आएका नागरिक वा गैर नागरिकलाई आफनो देशमा प्रवेश गरेपछि सरकारले अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ। यो सबै देशको हकमा लागु हुनुपर्दछ । हाल यो रोगको लागि कम्तिमा २ हप्ता क्वारेन्टाइनको अवधि तोकिएको छ। यो अवधि भनेको कोरोना भाइरस व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेपछि रोगका लक्षण तथा चिन्हहरु देखिने अवधि हो, जसलाई महामारी विज्ञानमा सराई अवधि भन्ने गरिन्छ ।
हुन त कोरोना भाइरस व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेपछि ३ हप्ता वा सोभन्दा बढी समयपछि पनि लक्षण र चिन्ह देखिएको पाइएको छ। तथापि विश्वस्वास्थ्य संगठनले हाललाई क्वारेन्टाइन अवधि २ हप्ता मानेको छ । संक्रमण फैलिएको देशबाट आएका मानिसहरुलाई अझ ३ हप्ता नै क्वारेन्टाइनमा राख्न सके यो रोग रोकथाम र नियन्त्रणको लागि थप उपलव्धिमुलक हुनसक्छ ।
क्वारेन्टाइनमा को-को बस्ने त ?
यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको बेला जुन जुन देशमा यसको संक्रमण फैलिएका छ, ती देशहरुबाट अर्को देशमा जाँदा अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने हुन्छ । नेपालको हकमा पनि यही लागु हन्छ । पछिल्लो पटक भारतमा पनि मार्च दोश्रो हप्तादेखि कोभिड – १९ का बिरामी देखिएकोले त्यसयता भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका पनि सबैले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो क्वारेन्टाइनस्थल दुई प्रकारको हन्छ । जुन होम क्वारेन्टाइन वा सरकारले तोकिएको क्वारेन्टाइन स्थल हुन ।
क्वारेन्टाइनमा बस्दा आवश्यक सामाग्रीहरुः- डिजिटल थर्मोमिटर, तापक्रमको मापन राख्ने लगबक, साबुन, स्यानिटाइजर, सुरक्षित र सफा शौचालय, नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क नम्वर( होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको हकमा)
क्वारेन्टाइनमा बस्नुको महत्वः
क्वारेन्टाइनमा बस्दा त्यसरी बसेका मानिसहरुलाई रोगका लक्षणहरु देखा परे-नपरेको हेरिन्छ । जसले गर्दा यदि कसैमा लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पतालमा जाँचपडताल गर्न पठाइने हुनाले समयमा नै रोगको निदान हुन जाने र व्याक्तिलाई पनि समयमा नै उपचार पाई थप जटिलता हुन पाउदैन भने अर्को उसले आफनो परिवार र समदायलाई संक्रमण सर्नबाट बचाउन सक्छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि त यो अति नै महत्वपर्ण छ । एउटा कोरोना केसले रोग लक्षण देखिन भन्दा नै ४८ घण्टा अघिदेखि नै रोग सार्ने हुँदा पनि क्वारेन्टाइन बस्न अति महत्वपुर्ण छ ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के हो?
कुनै पनि संक्रामक रोगको बिरामीको सम्पर्कमा आएका मानिसहरुलाई द्रुत खोजपड्ताल गरी सो रोगको निदानको लागि परिक्षण गर्नुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अति आबश्यक छ । यो समयमा नै गर्न सकिएमा नै रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गरी कोरोनाको फैलावट न्यून गर्न सकिन्छ । यो दक्ष प्रयोगशालाकर्मीबाट गर्ने गरिन्छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न क-कसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने त ?
१. कोरोनाको बिरामीका घरपरिवारका सबै सदस्यहरु । २. कोरोनाका बिरामीसँगै होस्टल वा त्यस्तै अवस्थामा बसेका मानिसहरु। ३. कोरोनाका बिरामीसँगै २ घण्टाभन्दा लामो हवाई यात्रा गर्दा दाँया बाँया अगाडि पछाडि दुई लाइनमा रहेका यात्रुहरु । ४. कोरोनाको बिरामीसँग २ मिटर वा सोभन्दा थोरै दुरीमा १५ मिनेट वा सोभन्दा बढी समयसम्म सँगै बसेका मानिसहरु । ५. एउटै बस, रेल वा कोठामा कोरोनाको बिरामीसँग २ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय बिताएका मानिसहरु ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्वः
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले संक्रामक रोगका बिरामीको सम्पर्कमा रही संक्रमणको जोखिममा रहेका मानिसहरुको छिटो पहिचान गरी स्वास्थ्य परिक्षण गरिने हुनाले एकातिर स्वयम सो व्यक्ति आफु संक्रमित भए नभएको पत्ता लाग्छ भने अर्कोतिर कथमकदाचित ऊ संक्रमित रहेछ भने अरुलाई रोग सर्नबाट बचाउन सकिन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामको सन्दर्भमा झन कन्टयाक्ट ट्रेसिङको महत्व धेरै छ ।
किन भने यो भाइरस सजिलै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्दछ । तसर्थ कुनै व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिनासाथ उसँग पछिल्लो २/३ हप्तामा बसाई, यात्रा वा अन्य कुनै तरिकाले सम्पर्कमा रहेका सबै मानिसहरुको छिटोभन्दा छिटो पहिचान गरी उनीहरुमा कोरोनाको परिक्षण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा समुदायमा बिरामीको संख्या भुसको आगो झैं फैलिने डर हुन्छ । अध्ययनले कोरोना भाइरस कुनै व्यक्तिमा रोगका लक्षण देखिनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि बिरामी भाइसरबाट मुक्त भएको पछिल्लो ४८ घण्टासम्म पनि मानिसमा सर्ने गर्दछ । त्यसैले जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अति महत्वपर्ण औजार हो ।
अन्तमा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँग जुधिरहेको हरेक देशका सरकारले यो महामारी रोकथाम र नियन्त्रण्को लागि क्वारेन्टाइन र कन्टयाक्ट टे्रसिङ दुवै औजारलाई व्यापक लागु गर्नुपर्दछ । यसको अलावा शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्ने र रोग रोकथामका लागि व्यापक स्वास्थ्य सन्देशको निरन्तर प्रवाह गर्न त छदैछ ।
अल्पविकसित देशहरुमा साधन र श्रोतको अभावमा व्यापक रुपमा यसो गर्न कठिनाइ हुन्छ । तथापि सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाभन्दा अहम अर्को विषय हुन सक्दैन। त्यसैले महामारी रोक्नको लागि स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यतिबेला अरु क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम कटौती गरेर भए पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नत्रभने हरेक देशमा अहिले अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रान्सजस्ता मुलुकहरुले भोगेका नियति दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । (लेखक तनहुँका युवा जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)